पैंतालीस लाखको बोका ! - चारदिशा
August 15, 2019 चारदिशा अन्तराष्ट्रिय
एजेन्सी – एउटा बोकाको मूल्य ३० लाख भारु । सहजै पत्याउन सकिने कुरा होइन यो । तर, लखनउ (भारत)मा सुल्तान नाम दिइएको एक बोकाको यस साता निकै चर्चा भयो । ६५ केजीको सुल्तानलाई बकर इदको अवसरमा लागेको बोकाको हाटमा बिक्रीको निम्ति सजाइएको थियो । ड्राइफ्रुट र बदाम मात्र आहारा लिने सुल्तानको मूल्य तोकिएको थियो– ३०,००,७८६।– भा.रु. अर्थात ४५ लाख नेपाली रुपैयाँ । आखिर एउटै बोकाको मूल्य किन यति चर्को तोकियो होला ? जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक छ । वास्तवमा सुल्तानको दुवै कानमा एकतर्फ ‘अल्लाह’ र अर्कोतर्फ ‘मोहम्मद’ लेखिएकोले त्यसलाई मूल्यवान ठानिएको हो । उर्दू भाषामा उक्त बोकाको कानमा जन्मजात नै त्यस्तो लेखिएर आएकोले महँगो मूल्य लगाइएको हो ।